Home News Dooda Amniga Ayeey Maanta soo Gabagabeeynayaan Xildhibaanada DFS
Dooda Amniga Ayeey Maanta soo Gabagabeeynayaan Xildhibaanada DFS
Xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa Maanta oo Arbaco ah waxa ay soo geba gabeynayaan doodii ku saabsaneyd dhinaca Amniga oo Isniintii soo bilaabatay.
Xildhibaanada oo labadii maalmood la soo dhaafay siweyn uga hadlay amniga,isla markaana ay walaac ka muujiyeen waqtigaan.
Xildhibaanada oo isku qoray dooda ayaa intooda badan hadlay waxa ay xukuumadda Ra’iisul Wasaare Kheyre ku eedeeyeen inay ku fashilantay dhinaca amaanka.
Qaarkood xildhibaanada ayaa dalbaday in Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo Wasiirka Amniga uu horyimaado si wax looga weeydiiyo amniga dalka.
Kulanka Baarlamaanka oo Maanta galaya Maalintii Saddexaad ayaa waxa uu yahay kulankii ugu xasaasinaa tan iyo markii la doortay baarlamaanka 10-aad,waxaana intooda badan ay sheegeen in amniga Muqdisho uu yahay xilligaan sidii ugu xumeyd.
Previous articleHowlgalo Amni Xaqiijin ah oo laga Sameeynaayo Baladweeyne!!
Next articleWararkii Ugu Dambeeyay Ee Galmudug,Xildhibaano sheegay in ay Xilka qaadista Carabeey ku Saxsanaayeen!!
Diyaar garoowgii ugu dambeeyay oo Kismaayo ka socda iyo amaanka oo...
Somaliland and Puntland exchange Artillery fire in Tukaraq